Madaxweynaha Puntland oo Umadda ugu Hambalyeeyay Munaasabadda Ciidda – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo Umadda ugu Hambalyeeyay Munaasabadda Ciidda
Seteembar 23, 2015 11:29 g 0
Khamiis, September 24, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo weli ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu Hambalyo ku aadan Munaasibadda Ciidul Adxaa u diray dhammaan umadda muslimiinta ah , gaar ahaan shacabka reer Puntland.
Madaxweynaha ayaa sheegay in maalmaha farxadeed awgeed loo baahan yahay inay is cafiyaan dhammaan umadda Soomaaliyeed , islamar ahaantaana laga farxiyo dadka danyarta ah iyo ubadkeena soo koraya.
‘’ Illaah waxaan ka baryayaa in sanadkaan sanadkiisa kale nagu gaarsiiyo Nabad-gelyo, Horumar, Wadajir , Midnimo iyo inaan ka shaqeyno midnimadeena iyo horumarkeena ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
‘’ Waxaan rajeynayaa in Soomaaliya wanaagsanaato, in Soomaaliya horumarto, in Puntland meesha ay hada joogto sanandka dambe meel ka fiican ay gaarto dhanka horumarka iyo nabad-gelyada ‘’ Ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa uu sidoo kale baaq nabadeed oo ku aadan joojinta colaada ee ka socota deegaanada Qorilay , Magaclay iyo dhulka Howka ah u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya .
‘’ Waxaan u sheegayaa inaan dagaalku xal aheyn , mana jiro qof colaada ku guulaysanaya , waana kuu dhimay kaa dhimay , walaalkaa weeye waxa aad dilayso , kii kuu hiilin lahaa weeye kan aad maanta xabadda u haysato ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
‘’ Waxaan rajeynayaa in caqligu shaqeeyo , waxaana rabaa inaan ku booriyo cilimo udiinka , madax dhaqameedka , isimada, ganacsatada , waxgaradka reer Puntland inay u kacaan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen daminta colaadaasi’’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Ugu dambeyn waxaa uu Madaxweynuhu ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee dagaalamaya inay joojiyaan colaada, miiska wada hadalkana isugu yimaadaan si ay ugaaraan xal rasmi ah , oo looga gudbayo colaada taagan .
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _24
Dowladda Puntland oo Cadaysay Go\_’aankeeda Doorashada Sanadka Danbe